नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : इन्टरनेटले संसारमा धेरै अवसरको ढोका खोल्दै जाँदा हाम्रा कतिपय भावनात्मक सम्बन्धका ढोका भने बन्द गरिरहेको छ !
इन्टरनेटले संसारमा धेरै अवसरको ढोका खोल्दै जाँदा हाम्रा कतिपय भावनात्मक सम्बन्धका ढोका भने बन्द गरिरहेको छ !
छोरीलाई छोराजस्तै गरी हुर्काउन खोज्दा हाम्रा छोरीहरूले कलेज पुग्दासम्म एक कप चिया बनाएर खान सकिरहेको देखिँदैन । जतिबेला हामी आफ्नो परिवारलाई खाना बनाएर खुवाउने मात्र होइन, अरू थुप्रै दायित्वहरू काँधमा लिएर हिँड्थ्यौँ त्यो उमेरमा उनीहरू पढाइमा बाहेक अरू कुरामा वास्तै नगर्ने भएका छन् । अध्ययनमा पनि सबैको रुचि छ भन्न मिल्ने अवस्था छैन । आफ्नो लागि नभएर बाबुआमाको लागि
पढिदिएजस्तो गरी ‘मैले पढिदिएकै छ नि’को शैलीमा कलेज–घर गरेको देखिन्छ । यो हाम्रो समाजमा हुर्कंदै गरेका सन्तानहरूको वास्तविकता हो । समान व्यवहार गरेर बनाउन खोजेकोचाहिँ छोरीसँगै छोरालाई पनि घर–व्यवहारमा निपुण र छोरीलाई पनि बाहिरको काममा समान रुचिको अवस्था थियो । विगत विभेदपूर्ण भयो भनेर फरक गर्न खोजेको हाम्रो हुर्काइमा खै के मिलेन, न छोराजस्तो, न छोरीजस्तो, न घरव्यवहार र भान्सामा रुचि न त बाहिर नै धेरै चासो…सोचेभन्दा भिन्दै तरिकाले नयाँ पुस्ता हुर्कंदै छ ।
कतिपय सन्तान बाबुआमाको बिग्रँदो सम्बन्धले तनाव छन् । पतिपत्नीबीच कामचलाउ सम्बन्ध अघि बढिरहेकामध्ये पनि धेरैजसो सन्तानका कारण तनावमा छन् । इन्टरनेटले संसारमा धेरै अवसरको ढोका खोल्दै जाँदा हाम्रा कतिपय भावनात्मक सम्बन्धका ढोका भने बन्द गरिरहेको छ । अहिलेका युवाहरू सकेसम्म आफन्तकहाँ जाँदैनन्, चाडबाड उनीहरूलाई बाबुआमाका लागि मनाइदिनेजस्तो बन्दै गएको छ, नातेदारहरू चिन्दैनन्, चिने पनि वास्ता गर्दैनन् । उनीहरू आफैँमा मग्न देखिन्छन्, खुसी छन् या दुःखी हतपत थाहा हुँदैन । ‘फेसियल एक्स्प्रेसन’ हेरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
एक साथीले भन्थे– घरमा साथीहरू आएको बेला छोरालाई नमस्कार गर बाबु भनेको काननजिक लगेर उसले दुई हात जोड्दा म त मरेजस्तै भएँ । अहिलेका बच्चाहरूलाई नमस्कार गर्न कति गाह्रो ? यस्तो अवस्थामा कतिपय परिवारमा पतिपत्नीबीच एक–अर्कामा दोषारोपण पनि हुने रहेछ, पतिले भन्ने तिमीले गर्दा बच्चाले संस्कार सिकेन । पत्नीले भन्ने तपाईं पनि त सँगै हुनुहुन्छ किन नसिकाएको त ? प्रायः बाबुहरूमा बच्चाले राम्रो काम गर्दा मेरो छोरा÷छोरी भन्ने, अलिकति तलमाथि भए पत्नीलाई दोष दिँदै तिमीले गर्दा भन्ने आमचलन छ ।
यता सन्तानका समस्या आफ्नै छन् । ढुङ्गेयुगदेखि इन्टरनेटयुगसम्म आइपुग्दा परिवर्तन त भइहाल्छ नि भन्ने मान्यतामा उनीहरू छन् । युवा पुस्ता आफँै तनावमय देखिन्छ । त्यसमा पनि बाबुआमाको झर्किंदो आवाज सुन्दा तिमीहरू भगवान् हौ र ? भन्ने मनमा आउँदो हो । शरीरमा हर्मोनको चलखेलसँगै अनेक तनावबाट उनीहरू गुज्रिनु त स्वाभाविक नै थियो । जे खोज्यो त्यही भेटिएझैँ लाग्ने इन्टरनेटले थप तनाव सिर्जना गरिदिएको छ । उनीहरूलाई के भएको होला भनी मनस्थिति बुझ्नका लागि बाबुआमा आफैंले अहिलेको परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्ने अवस्था छ ।